တရုတ်အပေါ် အလွန်အကျွံ မှီခိုခြင်းမပြုရန် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင် သတိပေး
ဖနွမ်းပင်၊ မေ ၁၃ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရည်မှန်းချက်ကြီးသော ခါးပတ်ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းမတစ်ခုပေါ်လစီ (One Belt, One Road Policy) မှာ အာဆီယံရေးရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၏ ဒုတိယနေ့တွင် လူပြောများသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပေါ်လစီမှ ရရှိလာနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများကို ရယူရေးကို လက်ခံကြိုဆိုကြသော်လည်း ပေကျင်းအပေါ်.
မူဆလင်များအပေါ် ဦးတည်သည့်အကြမ်းဖက်မှုများတွင် မူဆလင်များအတွက် အလုံခြုံဆုံးနေရာသည် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများပင် ဖြစ်ခဲ့သည် ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက လူစည်ကားလှတဲ့ လားရှိုးမြို့အတွက်တော့ ပူပြင်းလှတဲ့ ၂၀၁၃ မေလရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့များဟာ မီးတောက်မီးလျှံတွေကြောင့် အခြားမြို့တွေထက် ပိုမိုပူပြင်းနေခဲ့ပါတယ်။ မီးတောက်တွေဟာ မူဆလင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကြား ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့ရာကနေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။.
YHT တည်ထောင်သူ ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးကို Frontier မှ သောမတ်စ် ကင်း(န်) က သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၁ စမတ်ဖုန်း အပလီကေးရှင်းမှတဆင့် တက္ကစီ ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်သည့် Uber ဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်တွင် ယနေ့မှစတင်ကာ တရားဝင် မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် အမေရိကန်အခြေစိုက် Uber သည် ကမ္ဘာ့မြို့ပေါင်း ၄၅၀ ကျော်တွင် အငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကို တည်ထောင်ထားပြီးနောက် ဈေးကွက်သစ်အဖြစ် ရန်ကုန်တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်.